Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Zulkarnaen
Zulkarnaen, oo uu magaciisu dhabta yahay Aris Sumarsono, waxay asaxaabtiisa xag jirka ay ugu yeedhaan Daud. Saraakiisha Mareykanka iyo Indonesia waxay sheegeen in Zulkarnaen madaxa hawlgallada Jemaah Islamiyah (JI) kaddib markii Thailand lagu xiray jago hayihii hore Riduan Isamuddin, oo sidoo kale loo yiqiin Hambali. Zulkarnaen sida ay sharraxeen dadkii yiqiin waa nin yar oo hadalkiisu kooban yahay.
Zulkarnaen waxaa lagu tilmaamay in ay suuragal tahay in uu yahay qofka hoggaamiyaha ugu sarreeyo ee kooxda argagixisada Koonfur-bari Aasiya ee Jemaah Islamiyah. Waxaa la aaminsan yahay in uu ciidanka mudnaanta leh ee ka caawiyay fulinta qaraxii isbiimeyska ee Jakarta Marritt Hotel oo ay ku dhinteen dad gaaraya 12 qofood markii uu sanadka ahaa 2003-dii oo ka caawiyey diyaarinta bambooyinkii ay ku dhinteen dad gaaraya 202 oo qof ee lagu qarxiyay magaalada Bali sanadkii 2002-da.
Zulkarnaen wuxuu ka mid yahay dadka ugu muhiimsan ee ka tirsan al-Qa’ida xagga Bariga Asiya wuxuuna ka dad yar oo Indonesia ku sugan oo xiriir la leh ururrada argagixisada ee Al Qaacida. Zulkarnaen wuxuu shahaado ah cilmiga bay’oologijga ka qaatay jaamacadda Indonesia, wuxuuna sanooyinkii 1980-yadii ka tirsanaa kooxdii u horreysay ee xag jirka Indonesia ee tababar u tagay Afghanistan si uu u noqdo khabiir xagga kharribaada. Zulkarnaen wuxuu haatan madax u yahay kooxda xag jirka ah ee loo yaqaan Laskar Khos, ama ‘ciidanka gaarka ah,’ oo xubnaha ka tirsan laga qoray 300 oo Indonesia u dhashay oo lagu soo tababaray Afghanistan iyo Philippines.
Zulkarnaen waxaa soo tababarkiisii ku caawiyey Abdullah Sungkar, oo ahaa qofkii aasaasay JI iyo dugsiga la seexdo ee Islaamka al-Mukmin oo ay wax ka baran jireen Zulkarnaen iyo dad sare oo ka tirsan kooxaha xag jirka ah. Bartamihii 1980-yadii, Sungkar koox Indonesia u dhashay wuxuu u diray dalka Afghanistan si ay wax uga soo bartaan xeradii Mujaahidiinta ee uu ka talin jiray Abdul Rasul Sayyaf. Inta aannu dhiman Sungkar sanadkii 1999-kii, Zulkarnaen waxaa caadi ahaan lagu ag arki jiray la taliyihiisi, isagoo ka caawini jiray abaabulka qorshaha ajeendada dadka waayeelka ee xag jirka ah.
Waxaa la aaminsan yahay in Zulkarnaen uu ka qayb qaatay abaabulka dagaalladii jasiiradaha Maluku ee 1990-yadii, wuxuuna ka qayb qaatay qorshaha kulannada kooxaha xag jirka ee marar kala duwan tababar ku soo qaatay dalka Afghanistan, wuxuuna suurageliyay in ay ciidamada ku soo biiraan.
Taariikhda Dhalashada: 1963
Goobta Dhalashada: Bartamaha Java, Jakarta
Dhismaha Jidhka: Caato
Magacyada La Sheegto: Aris Sumarsono, Zulkarnaen, Daud